अल्ट्रासोनिक Degassing र तरलहरूको Defoaming - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
अल्ट्रासोनिकको उपयोग गरेर तरलहरूको Degassing र Defoaming एक धेरै प्रभावी प्रक्रिया हो। अल्ट्रासोनिकेसनले तरलबाट साना निलम्बन गरिएको ग्यास-बुलबुले हटाउँछ र प्राकृतिक सन्तुलन स्तरभन्दा तल भंग ग्यासको स्तर कम गर्दछ।
तरल पदार्थको डीगस्सिing र डिफोमिaming निम्न कार्यहरूका लागि धेरै उद्देश्यहरूको लागि आवश्यक छ:
कण आकार मापन अघि नमूना तयारी मापन त्रुटिहरू जोगिन
तेल र स्नेहक degassing पम्प अघि cavation को कारण पम्प पोशाक कम गर्न
तरल पदार्थहरूको गिरावट, जस्तै जुस, सॉस वा वाइन, माइक्रोबियल विकास घटाउन र शेल्फ लाइफ बढाउन
अनुप्रयोग, पोलि and्ग र वार्निशको डिगस्सिंग पहिले, उपचार वा भ्याकुम इन्फ्यूजन
तरल पदार्थहरू सोनीकेटि, गर्दा, ध्वनि तरंगहरू जुन रेडिएटि propag सतहबाट तरल मिडियामा प्रसारण गर्दछ फलस्वरूप आवृत्तिमा निर्भर दरहरूको साथ, उच्च-दबाव र कम-चक्र चक्र बारीमा बदल्छ। कम-चक्र चक्रको दौरान, अल्ट्रासोनिक तरंगहरूले तरलमा साना खाली श्याम बुलबुले वा voids सिर्जना गर्न सक्दछन्। साना बुलबुले ठूलो संख्याको एक उच्च कुल बबल सतह क्षेत्र उत्पन्न गर्दछ। बुलबुले पनि तरलमा राम्रोसँग वितरण गरिन्छ। विघटन गरिएको ग्यास यी खाली शून्य बबलहरूमा ठूलो सतह क्षेत्रको माध्यमबाट सर्छ र बुलबुलाहरूको आकार बढाउँदछ।
ध्वनिक तरंगहरु बुलबुले को एक त्वरित वृद्धि को लागि निकट आसन्न बुलबुले को स्पर्श र कोलोसेन्स को समर्थन गर्दछ। Sonication तरंगहरूले पनि पोत सतहहरु लाई बुलबुले हिलाउन मद्दत पुर्याउनेछ र यसले सानो बुलबुले तरल सतहको तल बढ्नको लागि बढ्दो र पर्यावरणमा आन्तरिक ग्यास छोड्न बाध्य पार्नेछ।
तरल पदार्थको Degssing Hielscher अल्ट्रासोनिक उपकरणहरु को एक शक्तिशाली अनुप्रयोग हो। भिडियोले पानीको ह्रासिंगको समयमा हिलस्चर UP200S देखाउँदछ।
Sonotrode S40 को साथ UP200S प्रयोग गरेर पानीको Degassing
हाइल्सचर २०० वाटको अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर प्रयोग तेलको अल्ट्रासोनिक डिगसेसिass।
तरलहरूको डीगसेसि and र डिफोमिaming प्रक्रिया सहजै देख्न सकिन्छ। ताजा-खन्याएको पानीको गिलास भाँडोमा, अल्ट्रासोनिकेसनले साना निलंबित बुलबुले कोलास गर्न र छिटो माथि सर्न बाध्य पार्छ। तपाईं तलको प्रगति छविमा यो प्रभाव देख्न सक्नुहुन्छ।
पानी को अल्ट्रासोनिक degassing (5 सेकेन्ड)
उत्तेजित तेलले निलम्बित बुलबुले वा फोमहरूको एक ठूलो संख्या समावेश गर्दछ। विशेष गरी शीतलकमा, यो समस्या हो। त्यहाँ, ग्यासका बुलबुले पम्पहरू वा नोजलहरूमा काभेटेशन प्रेरित पोशाकको प्रचार गर्दछ। तलको प्रगति छविले अल्ट्रासोनिक डिफोमिaming प्रभाव देखाउँदछ।
अल्ट्रासोनिक डीगस्सिing: उल्टो ग्यास बुलबुले तेलबाट अल्ट्रासोनिकेटर UP400St प्रयोग गरेर हटाइन्छ
Sonication सफा, बासी पानी मा साना खाली शून्य बुलबुले उत्पन्न गर्दछ। यी बुलबुले विघटन भएको ग्यासले भरिन्छन्, जुन बुलबुलेहरुमा सर्छ। फलस्वरूप बुलबुले बढ्न र माथि सार्दछ। डीगस्सिंग प्रभाव कुनै पारदर्शी तरलमा राम्रो देखिन्छ।
अल्ट्रासाउन्डले तरल सतहमा साना निलंबित बुलबुलेको उदाउँदो सुधार गर्ने क्रममा यसले बुलबुले र तरल बिचको सम्पर्क समयलाई पनि कम गर्दछ। यस कारणका लागि, यसले तरलमा पनि, बबलबाट ग्यासको पुन: भंगलाई सीमित गर्दछ। तेल वा रेजिनजस्ता उच्च चिपचिलो तरल पदार्थको लागि यो विशेष चासोको विषय हो। बुलबुले तरल सतहमा सर्नु पर्ने भएकोले अल्ट्रासोनिक डीगस्सिingले राम्रोसँग काम गर्छ, यदि कन्टेनर खाली छ कि सतहमा समय छोटो छ।
दृश्य प्रभावहरू भन्दा बाहिर
भिजुअल इन्स्पेक्शन द्वारा डिगासिंग प्रभावहरूको नाप शुद्धतामा सीमित छ। ग्यास सामग्री मापन एक अल्ट्रासोनिक डिगासिass दक्षताको बारेमा बताउन सही तरीका हो।
तरल पदार्थमा विघटन भएको ग्यासको निश्चित मात्रा हुन्छ। ग्यासको एकाग्रता कारकमा निर्भर गर्दछ, जस्तै तापक्रम, परिवेशीय दबाव वा तरलको आन्दोलन। स्थिर अवस्थामा, ग्यास एकाग्रता सन्तुलनमा आउनेछ। अल्ट्रासोनिक डीगस्सिing्गले परिस्थितिहरू परिवर्तन गर्दछ, किनकि तरल कम प्रेस बुलबुले र आन्दोलनमा पर्दछ। तसर्थ, अल्ट्रासोनिकेसनले तरलमा ग्यास एकाग्रता सन्तुलन स्तर तल कम गर्दछ।
जब Sonication रोकिन्छ र प्रारम्भिक अवस्था पुन: स्थापित हुन्छ, ग्यास एकाग्रता बिस्तारै फेरि प्रारम्भिक सन्तुलन स्तरमा पुग्छ, जबसम्म कुनै तरलमा कुनै ग्याँसको संपर्क हुँदैन, जस्तै एक बन्द बोतलमा। किनभने तरलमा ग्यासको पुन: विघटन पर्याप्त ढिलो छ, यो स्यानिकेशन पछि कम ग्यास तरलको साथ काम गर्न सम्भव छ। तलको ग्राफले यस प्रभावलाई चित्रण गर्दछ।
अल्ट्रासोनिक Degassing को चित्रण
इम्युइलिङ र विच्छेदन गर्नु भन्दा कम हुन्छ
अल्ट्रासोनिक डीगस्सिing्गले फैलावट र पायसको गुणस्तर सुधार गर्न सक्दछ।
अक्सर, पायस र फैलावमा तिनीहरूको स्थिरता वृद्धि गर्न सर्फेक्टन्टहरू हुन्छन्। सर्फ्याक्ट्यान्टहरूले तरल चरणमा छरिएका सामग्रीको सम्पर्क र सहवास वा समग्रतालाई रोक्दछ। यसको लागि, सर्फ्याक्ट्यान्टहरूले प्रत्येक कणको वरिपरि तह बनाउँदछन्। उही surfactants पनि तरल चरण मा निलम्बित ग्यास बुलबुले encapsulate गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता स्थिर बुलबुले धेरै बलियो हुन सक्छन्। स्थिर बुलबुले surfactant खपत, इमल्सन वा फैलावको गुणवत्ता कम गर्दछ, र कण आकार मापन गर्दा अनियमित पठन उत्पन्न गर्न सक्दछ।
स्थिर ग्यास बुलबुले को समस्या कम गर्न को लागी तरल पदार्थ Sonication द्वारा अपमान गर्नु पर्छ। तेल वा पाउडर जस्ता फैलाउने चरण थप्नु अघि उत्पादित बुलबुले कम नभएसम्म तरललाई सोनिक गर्नुहोस्। अन्य सामग्रीहरूमा मिक्स गर्ने क्रममा, नयाँ बबलुलिहरू वा भोरट्याहरू उत्पादन गर्नबाट बच्नुहोस्। यसले चाँडो ग्यास सामग्री बढाउछ।
कार्बन डाइऑक्साइड आउट गर्दै
Degassing को प्रभाव को प्रयोग र क्यान्सर को रिसाई परीक्षण मा कार्बनटेड पेय, जस्तै कोला, सोडा या बियर जस्तै प्रयोग गरिन्छ। कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस् बोतल चुहावट परीक्षणको बारेमा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नका लागि।
अल्ट्रासोनिक Degassing संक्षिप्त मा
तरलताको अल्ट्रासोनिक डिगासिingले निम्न सेटअप प्रयोग गर्दा राम्रोसँग काम गर्दछ।
मध्यमदेखि मध्यम अल्ट्रासोनिक आयामहरू लागू गर्नुहोस्!
एक ठूलो सतह क्षेत्र को साथ Sonotrodes प्रयोग गर्नुहोस्, जस्तै radially उत्सर्जक Sonotrodes!
तरल सतह वाइल सोनीकेटिंग माथि कम दबाव वा भ्याकुम प्रदान गर्नुहोस्!
तरल तातो, यसको चिपचिपापन कम गर्न!
Sonication समयमा वा पछिको ग्यास पृथकको लागि उथला कन्टेनर प्रयोग गर्नुहोस्!
ग्यासको बुलबुले माथि सर्न अनुमति दिन अशांत आन्दोलनबाट बच्नुहोस्!
अल्ट्रासोनिक डीगसासिingलाई ब्याच मोड वा इनलाइनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक इनलाइन अपरेशनको मामलामा, ग्यासको डिस्चार्जका लागि स्ट्यान्ड पाइप स्थापना गरिनु पर्छ र ग्यास पम्प लागू गर्नुपर्छ।
कृपया तलको फारम प्रयोग गर्नुहोस् तपाईंको तरल डीगस्सिंग आवश्यकताहरू वर्णन गर्न। हामी तपाईंलाई तपाईको निरादर प्रक्रियाको लागि प्रस्ताव पठाउन खुसी हुनेछौं।